गतिशील विज्ञापनको लागि खोजशब्दहरू उत्पन्न गर्नुहोस् Martech Zone
गतिशील विज्ञापनको लागि कुञ्जी शब्द उत्पन्न गर्नुहोस्
आइतवार, सेप्टेम्बर 23, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
पढ्दा जोन चाऊको साइट, मैले बिर्सें कि मैले लिलामी एड्सका लागि साइन अप गरें तर वास्तवमा कोड कहिले मेरो साइटमा राखेन। आज रात मैले मेरो एकल पोष्टमा कोड पोष्ट सामग्री र टिप्पणी सेक्सन बीच जोडें। उनीहरूले कसरी प्रदर्शन गर्छन् भन्ने कुराको लागि म منتظر छु।
लिलामी एड्स एक राम्रो सुविधा छ जहाँ तपाईं वास्तवमा खोजशब्दहरू निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं विज्ञापनहरू उत्पादन गर्न चाहानुहुन्छ। मेरो सम्पूर्ण साइटको लागि केहि सामान्य व्यक्तिहरू पत्ता लगाउनुको सट्टा, मैले यो राख्दछु परम ट्याग वारियर प्लगइन (फेरि) प्रयोग गर्न!
लिलामी विज्ञापनलाई आवाश्यक हुन्छ कि तपाईका कुञ्जी शव्दहरू डेफिमिटरको रूपमा अर्ध-कोलोनको साथ ढाँचामा। नतिजाको रूपमा तपाईले अल्टिमेट ट्याग वारियर कोडको आउटपुट अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्दछ। मैले पहिलो ट्यागलाई सूचीबद्ध गर्न मेरो ढाँचा गरेको छु र बाँकी बीचमा अर्ध-कोलोन र ठाउँ राख्छु। थप रूपमा, मैले अधिकतम keywords कुञ्जी शव्दहरू प्रदर्शन गर्न अधिकतम निर्दिष्ट गरेको छु र यसलाई अनुसरण गरेको default पूर्वनिर्धारित कीवर्डहरू जुन मलाई थाहा छ जहिले पनि विज्ञापन प्रदर्शन गर्दछ।
सामग्रीको लागि विज्ञापन लक्षित विज्ञापनको क्लिक-थ्रू दरहरूमा लिफ्टमा परिणामित हुनेछ। मैले हालसालै मेरो एउटा लक्षित साइटमा गुगल एड्सेन्स बनाम गुगल रेफरल्सको परीक्षण गरें र एड्सेन्सको क्लिक-थोरै दरको तुलनामा times पटक थियो। विज्ञापन मा प्रासंगिकता सबै छ! यदि तपाइँ सान्दर्भिक विज्ञापन आपूर्ति गर्नुहुन्न भने, तपाइँ केवल तपाइँको पाठकहरु ईर्ष्या गर्न जाँदै हुनुहुन्छ वा ती विज्ञापनहरु बेवास्ता गर्न बढ्नेछ। कोही पनि त्यो चाहँदैन!
एउटा नोट: जब तपाईं वास्तवमा कोड जाँच गर्नुहुन्छ, तपाईं सुरुमा कुनै परिणाम फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न। लिलामी विज्ञापनमा मानिसहरू भन्छन कि ती किवर्ड परिणामहरू निर्माण गर्न केहि समय लिन्छ। मलाई थाहा छैन कति समय लाग्छ। तपाईं अझै पनि लिलामी विज्ञापन ईन्टरफेस को रेफरल राजस्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि!
टैग: लिलामी विज्ञापन
Oxymoron साथ प्राविधिक मार्केटिंग